Heshiiskii dowlada iyo xisbiga MP oo qarka u saaran burbur | Somaliska
Rajada kaliya ee ay leeyihiin qoysaska aan caruurta lahayn iyo dadka la soo korsaday ee doonaya in ay Sweden ku midoobaan ayaa ahayd in la hirgaliyo heshiiskii dowlada iyo xisbiga Miljöpartiet ay ka gaareen arimaha Socdaalka.
Sanadkii hore ayay ahayd markii wasiirka Socdaalka Sweden Tobias Billström iyo haweeneyda Xisbiga Miljöpartiet u qaabilsan arimaha Socdaalka ay saxaafada u sheegeen in reeraha soomaalida la mideyn doono 1 July , iyagoo intaas ku daray in kama dambeys bish Maarso 2012 ay soo bandhigi doonaan mooshin ku aadan arintaan. Balan qaadkaas waxaa ku jiray in wax laga qaban doono reeraha caruurta leh, kuwa aan caruurta lahayn, caruurta la soo korsaday iyo dadka iyaga oo dacwada sugaya 18 sano gaaray.
Intaas waxaa ka dambeeyay in bishii Janaayo ay Maxkamada Sare ee Socdaalka soo saartay go’aan shuruudii ka qaaday reeraha caruurta leh balse aan ka hadlin dadka kale ee dhibaatadu haysatay. Lagama rajo dhicin ee waxaa loo hanweynaa mooshinka ay soo bandhigi doonaan xisbiga MP iyo Dowlada. Balse nasiib daro waxaa dhacday in Dowlada ay dib uga guratay arintii, oo ay hogaaminayaan xisbiga Moderaterna. Waxay ka bexeen balan qaadkoodii waxayna meesha ka saareen in wax isbedal ah lagu sameeyo sharciga.
Intaas keliya ma ahan ee waxay ka bexeen qeybo badan oo ka mid ahaa heshiiskii ay la gaareen xisbiga MP sida in daryeel caafimaad la siiyo dadka aan sharciga lahayn iyo in caruurtooda waxbarasho la siiyo.
Isbuucii hore waa anagii soo daabacnay in mid ka mid ah labada Afhayeen ee xisbiga Miljöpartiet Åsa Romson ay ku hanjabtay in ay ka baxayaan heshiiskii dowlada haddii aan wax laga qaban kama dambays bisha Augusti. Hadana waxaa sidoo kale hanjabaadii ku celiyay afhayeenka labaad ee xisbiga MP Gustav Fridolin oo sheegay in heshiiskii uu qiimo la’aan noqday maadaama aysan dowladu diyaar u ahayn in ay dhaqan galiyaan. Waxa uu sheegay in xisbigiisu ay ka bixi doonaan heshiiskaas.
Hadalka Gustav Fridolin ayuusan marna ku soo qaadin arimaha mideynta reeraha balse waxa uu ka hadlay arinta daryeelka caafimaadka ee dadka sharciga aan lahayn. Waxaa u malaysaa in dowladu ay ku guuleysatay in ay dadka ka dhaadhiciso in arintii mideynta reeraha la xaliyay oo lagu xaliyay go’aankii maxkamada. Waloow go’aankaas uu xal u keenay dadka u dacwoonaya caruurtooda balse intii kale wali wax xal ah looma haayo. Mana muuqato in ay dowladu soo wado wax la taaban karo oo arintaas ku saabsan.
Haddii uu guud ahaan burburo heshiiskii dowlada iyo xisbiga MP ayay u badantahay in mudo dheer la sugi doono in wax kale oo niyada lagu dhisto ay ka soo baxaan dhinaca dowlada.
Ilahay sharkoda ha nagaqabto kuwa keeni iyo kuwa didan wa damer iyo 2labadisa dhagode,
Asc dhamantin hadan fikir keyga kahadlo kuwan dad carurle iyo kuwa anan lahey midna mamuqato iney waxuhayan ilahey aya nogaqan abshirta alaha nawafajiyo
Axmed cabdalle says:
As,jimcale wad mahadsantahay,wana war farxadleh waxan kasijeclan laha inad tirahdo moshin lagu saari somalida aya la ansixiyay,swedan imanaye somali majirto gabdhihi swidashka aya fulo ti maanta ogufican e dhaqan iyo dinleh waxay noqotay mida jiniska xiran timahana sidaysay.odayash qabil qurun fadhi kudirir wilashi qaar dinti ayay sidi dharbadasheen qarkale wa la khanisa,malin dhow nin security khanis ah o supermarket alaabkaso gatay ayu iga jakin gareyay.intu barahayay ayu iwaydiyay dhalashadayda si fudud ayan ogushegay inan wil somali ah ahay.wuxu igu yiri i like somalian people becouse my boyfreind is somalian!wonderful,saad qof fican utahay swidan imaw cudur hurdo hilman aya kugu dhici waxadna kagarani aniga intabadan wax masoqoro akhrin kaliye.malin dhawayd ayan ku arkay qof fikirkisa dhibani waxu yir gabar aya kaso taktay ilma yar after 4 yrs ayay kulabatay ilmaheedi aya lagudaray carur dariska ah kaso saar ilmahadi aya lagu yir way garan wayday’
To axmed Walah been madan shegin fikirkada wan kugu racsanahy,
he who lives long sees most, markaa waligaa wax aad la yaabto filo, habase ahaate ha isku mashquulin maxay u dhacday iyo siday u dhacday toona hore uga soco sxb, dhanka kale dadka caruurta isku leh waxay leeyihiin rajo wanagsan, insha allaah ee abayaasha iyo hooyoyinku ha u diyaar garooban siday u manage gareen lahayeen caruurtoodas. xalayna waxaan arkayey dood kulul oo xusbiyada dhex martay intii u danbaysay ayaan kusoo gadhay markaa hadaad dawatay jimcaale soo gudbi bro tack.
asc dhamaan somalida qurbaha ku nool walalayaal dalkii iyo dadkii aan u duceyno ilaah nabad hanooga dhigo intiina wax garanaysa ee dhbaatada halkay ka jirto fahamsan
asc walahay ilahay ha idin sahlo anaga kolba hada dadka waa la isku keena ilahay kuwa iska maqan ha u sahlo inshalah
War jiraaba cakaaru imaan baalayiri hala iskasamro nin samraa sadkiis hela waxaa layiri nin an dhul marin dhaayo maleh wax kastaa wad arkeysa hadad noshahay wakastana gacant allah ayay kujiraan gaal waxba noomahayo ilahay wixii khayr noogu jiro ayan kabar yayna wana kaheleyna haduu nooqoray insha allah
Walh aqiyarta sharafta leh wax walbo alle agtisey yaalan swedan oo loo cararo wax ma tarto malinta qiyaamo halo diyar karoobo